Iimpawu ngokubanzi zeGuppy Fish | Ngeentlanzi
Los intlanzi yeguppy zezona zixhaphakileyo kwaye kufunwa ukuba ube nazo kwi-aquarium, wena zinika umbala kwaye azifuni nkathalo ekhethekileyoMhlawumbi yiloo nto yenye yeentlobo ezithandwa kakhulu. Ikwanazo iindidi zemizekelo, nangona zonke iimpawu zazo zinokuba umsila owahlukileyo ngakumbi emadodeni, zonke ziziphumo zokulungiswa kwemfuza zii-aquarists.
Ii-Guppies ziimpawu zamanzi amatshaBayaziqhelanisa neemeko zamanzi, nangona kucetyiswa ukuba ubanyuse kumaqondo obushushu aphakathi kwama-22 ° C nama-28 ° C. I-pH yamanzi kufuneka ibe yi-alkaline kancinci, iphakathi kwe-6,5 kunye ne-8 kwaye uyakufuna icebo lokucoca ulwelo kunye neoksijini.
Ngabaka petiole usapho, ngaphakathi kweqela le-cyprinodontiformes, igama layo libangelwe ngumzamo we-Bhritane uRobert Guppy, wokuhambisa olu hlobo ukusuka kwilizwekazi laseMelika luye eYurophu, nangona yayifunyenwe kwiminyaka eyadlulayo ngumJamani.
Kulula ukwazi ukuba ngubani oyindoda kunye nomntu obhinqileyo. Amadoda mancinci kwaye ayabonakala kuba imibala yawo ibetha ngakumbiNgapha koko, ilungu lezesondo, elibizwa ngokuba yi-gonopod, libekwe ngasemva kwentlanzi kwaye limile kakhulu kangangokuba luphawu kunye nophawu olwahlula kwabasetyhini. Amadoda afikelela ukulinganisa phakathi kweesentimitha ezi-3 ukuya kwezi-6, Ngelixa abantu basetyhini banokufikelela kwiiyunithi ezisibhozo ngobude kwaye babonakalise imibala eqondayo kunye neyunifomu.
El Intlanzi yeguppy inoxolo ngendalo ukuze ube neqela labo kwi-aquarium. Kufuneka kuqatshelwe ukuba azihambelani kakhulu neentlanzi zommandla, ezinje nge Ukunyuka okanye iBetta, ii-guppies zihlala zisebenza kakhulu kwaye zinokuqhekeka zibe ziintlobo ezizolileyo. Ngaphandle kobungakanani bayo obuncinci, kuya kufuneka uzame ukungagcini i-aquarium.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Guppy » Iimpawu ngokubanzi iintlanzi zeGuppy
Ndinenkxalabo endinayo guppy eyindoda kunye nemazi 3 glowo tetra kunye neplati. Kuyavela ukuba i-guppy eyindoda eleqa iplati iya kuba yinto eqhelekileyo